Puntland oo ka hadashay Dhaqdhaqyo Soomaaliland ka wado gobolada SSC – SBC
Puntland oo ka hadashay Dhaqdhaqyo Soomaaliland ka wado gobolada SSC
Posted by Webmaster on Noofember 26, 2012 Comments
Kulan saxaafedeed uu maanta ku qabtay gudaha aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid ayaa waxa uu kaga galadlay Xadgudubyo uu sheegay in maamulka Soomaaliland uu ku soo sameeyay deegaano ka tirsan Puntland.
Wasiirku waxa uu sheegay in maamulka Puntland ay ka soo horjeedaan bur burinta wadahadaladii iyo nidaamkii ay dowladaha caalamku ku dhexdhaxaadinayeen Soomaaliland iyo Puntland, islamarkaana aysan dhicin marnaba in puntland ay ku gardarooto maamulka Soomaaliland sida maamulkaasi uu ku sameynayo Puntland.
“Dowlada Puntland waxay aad u cambaareyneysaa dhaq dhaqaaqyada gardarada ah ee ay isbalaarinta ka tahay Maamulka Soomaaliland, waxaana dhacday in dhowrjeer ay gudaha u soo galeen ciidankooda gudaha Puntland” ayaa ka mid ahaa hadalada wasiirka Warfaafinta Puntland.
“Bishan horaanteydii waxaa bilowday, waxaa bilowday dhaq dhaqaaqyo siyaado ah oo uu maamulkaasi ka wado gobolada qar ee Puntland taas oo ay ugu dambeysay maalinimadii shalay oo ay u dhowaadeen degmada dhahar” ayaa markale uu shirkiisa jaraa’id ku yiri wasiir Maxamuud Caydiid.
Ka dib hadalkiisa wasiirka waxaa ay saxaafada weydiiyeen su’aalo ku aadanaa wararka puntland ay ka soo saarto marka ay dhacdooyinkan oo kale dhacaan in ay ku ekaato hadal oo keliya oo aanay jirin talaabooyin kale oo ay qaadaan.
Waxaase wasiirku sheegay in Puntland ay ilaalineyso Nidaamka iyo degenaanshaha labada dadweyne oo aanay dooneynin in uu dhiigu daato.
Faysal Khaliif Barre